မြန်မာ့အကြွေး ဒေါ်လာသန်း ၃၅၀၀ ကျော် ဂျပန်က လျော်ပစ်လိုက်ပြီ
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု၊ အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးကြိုးပမ်းမှု၊ စီးပွါးရေးနဲ့လူမှုရေးပြောင်းလဲ တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်မှုတွေကို အားပေးကူညီတဲ့အနေနဲ့ မြန်မာအစိုးရထံက ရစရာရှိတဲ့ကြွေးမြီ အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း ၃၅၈ဝ ကို ဂျပန်နိုင်ငံ လျော်ပစ်လိုက်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဂျပန်သံရုံးရဲ့ ဇန်နဝါရီလ ၃ဝ ရက်နေ့ကြေညာချက်မှာ မြန်မာပြည်ရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းတွေကို ဆက်လက်ပံ့ပိုးဖို့ အရေးကြီးတယ်လို့ ဂျပန်အစိုးရက ယုံကြည်တဲ့အတွက် အကူအညီတွေ ကျယ်ကျယ်ပျံ့ပျံ့ပေးအပ်မှာ ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ မြန်မာပြည်အနေနဲ့ နိုင်ငံတကာကနေ အထောက်အပံ့တွေ ရရှိရေးအတွက်လည်း ဂျပန်နိုင်ငံက ဆက်လက်ဦးဆောင်ကြိုးပမ်းမှာဖြစ်ကြောင်း ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ လာရောက်တွေ့ဆုံဖွယ်ရှိ
မြန်မာအစိုးရသစ်ကို ဂျပန် ကူညီမည်
မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေး ကူညီဖို့ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ကတိပြု
ဟာ ပိုက်ဆံတွေ ပိုပြီး တိုက်လေယဉ်အသစ်တွေ ထပ်ဝယ်တော့မယ်။ ဘုရားတရားသာတ ထာုးကပေတော့ ဗျို.
Who used that money, who mismanaged the country's economy, who is responsible. World Bank and ADB must not lend money to the Dictators who are not responsible for their peoples. To be eligible for the Loans, the govt must be cleanly elected Government if not the Elected Governments, have no obligation to pay the Loan taken by their predecessors, the notorious Dictators. Present Burmese Government is not cleanly elected Government, they are not eligible for such generousness.